नेताहरु रेमिट्यान्सबाट देश विदेश सयर गर्ने, हामीले आफ्नै खुन-पसिनाको आइफोन ल्याउन नपाइने? « Postpati – News For All
नेताहरु रेमिट्यान्सबाट देश विदेश सयर गर्ने, हामीले आफ्नै खुन-पसिनाको आइफोन ल्याउन नपाइने?
टिकाराम वली । ४० अर्ब रुपैयाँ एनसेल ठग्यो । एरपोर्टबाट छिरेको ३३ किलो सुन त्यसै हरायो । विदेशी संस्था एनजियो आइएनजियोलाइ देश लुट्न पठाइयो । करोडौं विदेशी गाडीमा नेताहरु हिड्न मिल्ने । तर श्रमिकले लिएको एउटा कट्टु पनि एयरपोर्टमा छोडनु पर्ने हो ?
अरबौको व्हाइटवडी बिमान घोटाला लथालिङ्ग छ । नेता कर्मचारीको भ्रष्टाचार छताछुल्ल छ । तर श्रमिकले पसिना रगत बगाएर लिएको सामानमा रोक लगाएर नेपालमा कस्तो समृद्धि आउने हो ?
बिदेश गएका नेपाली युवतीहरुको रगत, पसिना, लाश र रेमिटेन्सबाट तपाईंहरुका छोरा छोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपमा सबै सुबिधा लिएर पढ्न मिल्ने ? हामीले पसिना बगाएर एउटा फोन, टिभी र एक जोर कपडा ल्याउदा त्यसमाथि गिद्दे नजर लाउने लाउने यो कस्को सरकार हो ? जनताको सरकार हो कि महाराजाहरु को सरकार हो ?
आफ्नै देशमा रोजगारी दिन नसक्ने । भएका कलकारखाना नदीनालाहरु पनि विदेशीलाई बेच्ने । अनि बिदेशी उत्पादन उपभोग गर्ने यो कस्तो राज्य हो ?
शिक्षामा कर, स्वास्थमा कर, बाच्नको लागी कर, मर्न पनि कर । करले थिचिएका नागरिकहरुको ज्युउने के छ आधार ? आफ्नो स्वदेशी सामान उत्पादन गर्ने हैसियत नसक्ने नेपाल सरकारले बिदेशी सामानको उपभोग गर्दै नागरिकलाइ दुख दिन पाइन्छ ?
स्वदेशी सामानको उपभोगका लागि एरपोर्ट कडाइ भएको भए पनि स्वदेश फर्किने युवाहरुले कति गर्ब गर्थे होला । स्वदेश पसेर पनि यही बिदेशी उत्पादन उपभोग गर्नु पर्ने हो भने एरपोर्ट कडाइको के अर्थ ?
खाइ नखाई १२ घन्टा श्रम गरेर, घर फर्कदा आफ्नो घरपरिवारको आवस्यकता पुरा गर्न ल्याएको सामानमा पनि रोक लगाउने भए, विदेशबाट भित्र्याउने रेमिटेन्स र मेनपावर पनि बन्द गर सरकार । आफनै नागरिकले विदेशमा पैसा बगाएर रेमिट्यान्स पठाई दिएको राजस्वबाट सरकारी गाडी चढ्ने मन्त्रि नेताहरुले तिनै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाइ एरपोर्टमा लुट्न किन तल्लिन छौ ?
बिदेशी अनुदानमा नेता मन्त्री र सांसदहरू शयर गर्ने, विदेशी डलरमा गाडी चढ्नेहरुले स्वदेशी उत्पादन देखाउ, अनि विदेशबाट नेपाल आउनेलाई सिन्को पनि ल्याउन नदेउ । आफ्नै देशको उत्पादनमा आत्मा निर्भर हुने हति नभएकाहरुले बिदेशीको दुइ पैसाको सामान रोक लगाउन लाज पनि छैन ?
नेपाली कामदारहरु जाँदा दलाल म्यानपावरहरुबाट लुटिदै जानु पर्ने, विदेशमा भनेजस्तो काम पनि पाउनु नपर्ने, अनि घर फर्किदा पनि राज्यको कानुनि लुटमा लुटिनु पर्ने तिम्रो देशको गणतन्त्रको यहि नीति हो ?
गरिबका छोरा छोरीले खाडीमा बगाएको रगत पसिनाले आएको रेमिटेन्स हसुरे आफ्ना छोरा छोरीलाइ अमेरिका, अस्ट्रेलियामा र युरोपमा पढाउने, आफ्नै बलबुताबाट आर्ज्याको दुइपैसाको पोको एरपोर्टमा लुट्न लगाउने अलिकति पनि लाज छैन ?
उनीहरुकै रेमिटेन्सले अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपमा शयर गर्ने तर आफ्ना बालबच्चाहरुको लागि ल्याई दिएको चकलेटमा कडाइ गर्ने ?
याद राख्नुहोस, नेता ज्यु ! हरेक महिना त्यही एयरपोर्टमा रातो बाकसमा लास भई फर्किरहेका छन परदेशीहरु । मानसिक, सारारिक यातनाहरु झेलेर रेमिट्यान्स दिएका छन । दैनिकी चलाउन दुइ पैसा जोडेर दुइ थान मोबाइल, एक थान ल्यापटप, एक थान टिभीले देश उजाड़ने हो भने युवाहरुलाई बाहिर जान रोक लगाउनुस बरु मरे देशमै भोकै मरौला, बाँचे संगै बाँचौला ।